Ijubane le-gearbox le-Gearheads yejubane ngentengo yezentengo eshibhile Yezimboni
Ijubane le-gearbox elishintshayo lentengo yezentengo ezishibhile yezimboni
Sinikeza ngebhokisi lebhokisi lokunciphisa isivinini elinamandla okuphezulu.
Ijubane le-High Reducer Gearbox
Kukhona ukukhethwa okukhulu kwama-gearbox kanye nama-speed reducers ezinhlobonhlobo zezinhlelo zokusebenza ezidinga i-torque ephezulu nejubane elihamba kancane. Zonke izinciphisi zethu zeTransmission Speed ​​zinezinga eliphezulu namandla. Thola amadili amahle kuma-Industrial Gearboxes & Speed ​​Reducers.
Yonke imikhiqizo yethu
Kuthiwani nge-Speed ​​Reducer Gearbox?
Izinciphisi zegiya lesibungu, ezitholakala ngedrayivu eqondile noma engaqondile, zisetshenziswa ekusetshenzisweni kwamandla wehhashi aphansi kuya kokumaphakathi ukunciphisa isivinini nokukhuphula i-torque. izinciphisi zokunciphisa ijubane lesibungu kathathu ziyatholakala ngokulinganisa kusuka ku-5000: 1 kuya ku-175000: 1 namabanga aphakathi nendawo ukusuka ku-7 "kuya ku-20" .Izinciphisi zamagiya weplanethi zinamagiya ahlelwe ngegiya lelanga elisezingeni eliphakathi nendawo, elinamazinyo angaphandle ahlangana nelilodwa noma amagiya eplanethi amaningi.Ama-gearmotor ethu engile engakwesokudla nama-reducers afaka ukusebenza kahle kwe-state-of-the-art. Thola ibhokisi lokunciphisa igiya elingaphakathi, izinciphisi zamagiya okuxhumanisa, izinciphisi zejubane le-baldor nokuningi ngobukhulu obuhlukahlukene.
Iyini injongo usebenzisa i-Speed ​​minimer gearbox?
Uma kuqhathaniswa ne-High Speed ​​Gear Reducer, i-Speed ​​minimer gearbox isetshenziselwa ukunciphisa ijubane lokufaka, ukusuka emotweni noma okushayela okuthile, ngenkathi futhi iphindaphindeka i-torque amanani okufaka kuya kushaft okukhiphayo shaft noma umshini oqhutshwa Sakha izinhlobo ezahlukene ze-Speed ​​minimers, eziklanyelwe ukwandisa i-torque futhi sinciphise ijubane lomthwalo wemoto yakho kagesi. Inikeza imikhiqizo esezingeni eliphakeme, ephansi. Lapho kuklama i-speed ehlisa, kungakhathalekile ukuthi uhlelo lusebenza. Ngamanye amagama, i-gearbox ehlaziya inyusa i-torque futhi inciphise ijubane lemoto. I-hole hole shaft ehlinzeka ihlinzeka ngembobo ephakathi nendawo yokulungiswa kohlobo lwesakhi sokuguquguquka komklamo wesistimu nezinketho zokonga isikhala. Thola i-motor motor gear yakho ehlise kalula phakathi kwemikhiqizo engama-45 ephuma emikhiqizweni ehola china.
Ezinye Izikhombo zebhokisi lamagiya wejubane.
I-Speed ​​Reducer Gearbox
Izikhombo Ngeminye Imikhiqizo Yokudlulisa Amandla Ngaphezulu
Uma ufuna ukuthola amadili amahle ku-Speed ​​minimer gearbox
Inkampani yethu yakwaMoto yenza uhlobo lomdanso nohlobo lwezibungu i-reducer yamagesi (amabhokisi amagiyimu) kwe-gearmotor. Sikulungele futhi sibheke phambili ekubambisaneni kwethu. Sithatha ikhwalithi njengenzuzo nentengo ephansi njengobuqotho.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nathi futhi lapha kulandelayo othintana nabo. Sizokuphendula ngokushesha!
I-whatsapp / Wechat: 008618563806647
E-mail: [i-imeyili ivikelwe] I-ID ye-Skype: qingdao411